ISINXIBO SEFREEZER KUNYE NEHAUNDRY HACKS - LUNGELELANISA KWAYE UCOCE
Kutheni le nto kufuneka ugcine iimpahla zakho kwifriji
Bekuya kuba kuhle ukuba besinokuzisombulula zonke iingxaki zethu zokunxiba ngokukhawuleza sikhawuleze ngokusebenzisa iwasha kunye nesomisi. Kodwa ezinye izinto azinakumelana nobunzima bazo - kwaye ezinye iingxaki azinakusombululwa nge-washer kunye ne-dryer. Kukho esinye isixhobo sendlu esixhaphakileyo, nangona kunjalo, esijongana nezinto ezithile zokunxiba. Nazi ezinye izihlandlo zokuncamathelisa iimpahla kwisikhenkcezisi endaweni yoko.
Hlaziya iimpahla zesikhumba
Ukuba unebhatyi yesikhumba, isiketi, okanye iblukhwe onokuyilungisa kancinci, zifake kwisingxobo seplastiki esitywiniweyo kwaye usibeke kwisikhenkcezisi ubusuku bonke. ULyndsey Butler, umnini wevenkile yesikhumba Ndlela-ntle , iqinisekisiwe Ubuhle ukuba iqhinga lefriji lisebenza ngenene ekupheliseni iintsholongwane kunye nevumba.
Gcina ikhesmere kunye nolunye uhlobo lwefayibha yengubo ekuhlayweni nasekuphaleni
Ukubeka ijezi yakho kwingxowa yeZiploc kwifriji ubuncinci iiyure ezimbalwa kuya kunciphisa imicu kwaye kuncede ukunciphisa ukubhobhoza kunye nokuphalaza.
Yenza iithayithi zakho zihlale ixesha elide
Ngokufana nendlela ifriji eqinisa ngayo iifayibha kwizikhuselo zendalo zefayibha, iithayithi zinokufumana ukomelela kubude bexesha labo ngokuchitha ixesha kwifriji. Oku Ukucokisa 29 Isiqwenga sichaza inkqubo: Zibaleke phantsi kwamanzi, zikhuphe ngaphezulu, emva koko uzifake engxoweni nakwifriji ubusuku bonke.
Fumana enye into yokunxiba okanye emibini ngaphambi kokuba uhlambe ijini yakho
Ngelixa singacebisi ngaphambili i-washer iyonke, ngokuncamathela kwijean yakho egugileyo kwisikhenkcezisi (kwakhona, kwisingxobo esitywiniweyo) ubusuku bonke buya kulwa nokungabikho kokutsha ukuze ulolule ixesha lakho phakathi kokuhlamba.
De-zinuke izihlangu zakho
Intsholongwane ibangela ivumba. Xa izihlangu zakho zinuka, ukubulala iintsholongwane kufikelela kwingcambu yengxaki. Beka izihlangu ezinuka kamnandi engxoweni efrijini okwethutyana, kwaye uyakufumana ukukhupha isibini esinukayo.
Bulala umbungu otya uboya
Inyaniso encinci eyaziwayo: Yimibungu yenundu, hayi amabungu amadala atya loo mingxunya mincinci idimazayo kwimpahla yakho. (Ewe kunjalo, ukuba ubona amabhu asebekhulile, unokuba nengxaki ngemibungu, nayo.) Iibhola zakho eziqhelekileyo zenundu sisisombululo kwingxaki-kodwa ziyanuka, zinokubangela ii-carcinogens, kwaye kufuneka zisetyenziswe impahla kwisitya esitywiniweyo. Kwaye iibhola zendalo zendalo azisebenzi kwaphela. Kodwa ucinga ntoni? Isikhenkcezisi senza njalo! Ibulala umbungu ngaphandle kwempembelelo ezimbi kuwe. Kwi INew York Times inqaku, uprofesa weYunivesithi yaseArizona wezinto eziphilayo kunye nebhayoloji yendaleko uBruce Walsh ucebisa ngentliziyo yonke isikhenkcezisi sokujongana neenundu zokutya iimpahla: Kukuthintela iimbumbulu. Eyona nto intle onokuyenza kukubeka [impahla] kwisingxobo seplastiki uze usigodole. Kule meko, iiveki ezimbini zokufakwa kwisikhenkcezisi zilungile.
Phula izihlangu ezintsha
Endaweni yokubingelela iinyawo zakho ukwenza izihlangu ezomeleleyo zisihlangu, vumela ifriji yenze umsebenzi. Ndibuza ukuba kanjani icebisa ukuzalisa iZiplocs ngamanzi kwaye uzifake kwiindawo eziqinileyo zezihlangu zakho. Xa amanzi esanda njengoko ebanda, uya kuzolula ngobunono izihlangu zakho.
Ngaba ufanele uthenge ngoku okanye ugcine ngaphezulu ukuze uhlawule ngentlawulo? Nantsi indlela yokuthatha isigqibo
Ungalikhusela njani iKhaya lakho ngeNkanyamba okanye enye iMozulu embi
Iindlela ezili-15 eziGcina imali eziNinzi zokuCutha iiNdleko zokuLungisa kwakhona
Unganceda ukuGcina iNyosi yoLuntu kunye nale Ndlu yeNdlu ethandekayo ukusuka kwiCostco
10:10 inani leengelosi
Iyintoni intsingiselo ye1212